Inona avy ireo singa mandrafitra afisy japoney? | Famoronana an-tserasera
Tsy afaka miresaka momba ny famolavolana sary isika raha tsy mieritreritra an'i Japana, iray amin'ireo singa manan-danja indrindra izy ireo raha ny momba azy mampita hafatra na hevitra amin'ny maso.
Hiresaka momba ny afisy japoney ary noho izany dia endrika sary japoney izay misongadina kokoa noho ny hafa ary mora fantatr'ireo izay mandinika azy ireo. Ny asa japoney dia mora fantatra amin'ny fampiasana loko sy endri-tsoratra ary tsipika.
La tena aesthetic tsotra dia miavaka amin'ny fomba japoney. Milaza izy ireo fa ny Japoney dia olona manana zavakanto amin'ny ambaratonga rehetra ary mitady fifandanjana sy hatsarana hatrany. Noho izany, ny mpamorona dia mandray anjara amin'ny fironana amin'ny hatsaran-tarehy, ny fahadiovana ary ny tsirony tsara.
Ny iray amin'ireo lafiny miavaka indrindra amin'ny famolavolana sary Japoney dia ny hifanaraka amin'ny zava-, io toetra io dia mifandray amin’ny fahendrena.
1 Zavakanto fahiny
2 Singa mandrafitra ny famolavolana afisy japoney
3 Mpamorona sary Japoney tsara indrindra
Japana dia iray amin'ireo firenena nanan-kery indrindra teo amin'ny tontolon'ny zavakanto noho ny fandraisany anjara toy ny maritrano sy ny zavakanto plastika.
Tamin'ny vanim-potoana Edo nanomboka tamin'ny 1603 ka hatramin'ny 1868 ny Manomboka mivoatra ny zavakanto afisy japoney avy amin'ireo mpanakanto amin'izao fotoana izao. Manomboka amin'ny sary hosodoko mankany amin'ny taratasy ho fanohanana ny famoronana. Amin'ity vanim-potoana ity dia miseho ny asa noforonin'ny mpanakanto ao amin'ny sekoly Rinpa ary ny sary hosodoko sy ny ukiyo-e.
Nandritra ny fotoana ela izy ireo no namorona afisy mifototra amin`ny intuition, fihetseham-po amin`ny alalan`ny kapoka tsotra sy ny tandindona. Noho ireo sekolin-javakanto sy ireo mpampianatra nanome lesona, dia niseho ireo mpanao afisy voalohany, mpanao sary ary mpanao sokitra, ankoatra ny asa hafa.
Nanomboka teo, Japoney sy ny tantaran'ny famolavolana sary dia mifandray ary nisarika ny fitaomana isan-karazany ny constructivism Rosiana, ny hetsika De Stijl, ny Bauhaus ary ambonin'ny kolontsaina tandrefana rehetra taorian'ny Ady Lehibe II.
Mampifangaro ireo fitaomana rehetra ireo sy ny tsirony amin'ny fomban-drazana razambe, dia manana endrika sary Japoney izahay vokatr'izany.
Tamin'ny 1868, Japon no lasa hery ara-toekarena faharoa eran-tany izay nanampy tamin’ny fampitomboana ny vokatra azony, eo amin’ny sehatry ny varotra, ny fifandraisana amin’ny alalan’ny logos... Tamin’izay no nidiran’ireo mpamorona sary japoney, nitondra ny fomba mampiavaka azy ireo.
Singa mandrafitra ny famolavolana afisy japoney
La fomba famoronana, loko na fampiasana géométrie dia telo amin'ireo lafiny tena ilaina amin'ny fomba japoney. Ny endrika japoney dia namorona ny fiteniny manokana noho ny maha-izy azy amin'ny fampiasana typography sy famantarana sary.
ny Ny endri-tsoratra ampiasaina amin'ny famolavolana japoney dia voafetra ihany ary izany dia manampy ny famantarana ny marika iasany misongadina amin'ny afisy.
Mba hahatakarana ny estetika Japoney, dia tsy maintsy mahatakatra ny filozofian'ny fiainan'izy ireo ianao, ka izany no mahatonga antsika hahita ny tenantsika manoloana ireo sombin-javatra amin'ny antsipiriany. Famolavolana sary japoney milalao amin'ny tsy fahalavorariana ny fahafahana mahita sombin-javatra asymmétrie na ny fampiasana isa hafahafa izay matetika no maneho ny tsy fahalavorariana resahinay.
Ny maoderina dia mifangaro amin'ny asymmetrical, ity fironana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Wabi-Sabi, ny dikan'izany dia hoe jereo ny hatsaran-tarehy amin'ny tsy lavorary. Omeo lanja ny tsotra sy madio amin'ny alalan'ny endrika intuitive.
Ny iray amin'ireo marika mampiavaka indrindra amin'ny endrika japoney dia ny fampiasana lamina voninkazo misy foana amin'ny kolontsaina japoney mba hanehoana marika na fihetseham-po. Amin'ny lafiny iray, ny tarehimarika geometrika na ny lamina dia maneho ny firindrana.
Mba hisarihana ny sain'ny vahoaka tanora kokoa, ny mpamorona dia mampiditra sary avy amin'ny aingam-panahy japoney na izay mitovy, Manga. Ireo fanoharana ireo dia miavaka amin’ny masony lehibe, ny orony kely ary ny vavany, ary ny fihetsiny akaiky. Matetika izy ireo no ampahany lehibe amin'ny afisy.
Ny fironana iray hafa misy amin'ny afisy japoney dia mifandraika amin'ny inona kawaii, miaraka amin'ny kolontsain'ny mamy sy malefaka. Izany dia manampy amin'ny fananganana fahatokisana ary mitondra ny marika ho akaiky kokoa ny mpampiasa. Mamorona fahatsapana hatsaram-panahy, fifaliana, zavatra tsara foana izy ireo.
Araka ny efa voalazantsika, ny famolavolana japoney dia mandinika ireo marika tranainy sy ny nentim-paharazana, toy ny calligraphy. Ny fanaovana taratasy dia heverina ho zava-kanto izay vitsy no mahavita azy. Mahazatra ny mahita litera voasoka amin'ny afisy izay mitondra amin'ny fampifangaroana ny maoderina sy ny mahazatra.
Mpamorona sary Japoney tsara indrindra
Ny estetika amin'ny famolavolana sary japoney dia ekena hatrany eran'izao tontolo izao, nahazo mari-pankasitrahana maro izy noho ireo solontenany malaza indrindra.
Tsy te hanakatona ity lahatsoratra ity izahay raha tsy miresaka momba ireo mpamorona sary Japoney manan-kery indrindra.
Shigeo Fukuda. Teraka tany Tokyo tamin'ny 1932. Mpamorona manana ny fombany manokana izay mampiavaka ny fampiasana illusion optika. Voataonan'ny fironana origami. Ny mampiavaka azy dia ny fampiasany sary mainty amin'ny fiaviana miloko marevaka.
Yugo Nakamura. Teraka tao Nara, Japon tamin'ny 1970. Antsoin'izy ireo hoe genius of flash izy ary fantatra ho iray amin'ireo mpamorona tsara indrindra eran-tany.
Ikko tanaka. Teraka tao Nara, Japon tamin'ny 1930. Mbola aingam-panahy ho an'ny mpanakanto vaovao ny asany taorian'ny nahafatesany. Nampitambatra ny fomba tatsinanana sy ny tandrefana izy io.
Ryūichi Yamashiro. Teraka tany Japon tamin'ny 1920. Noheverina ho angano amin'ny famolavolana sy ny dokam-barotra. Ny iray amin'ireo asa malaza indrindra dia ny "Forest" afisy typografika.
kazumasa nagai. Teraka tao Osaka, Japon tamin'ny taona 1929. Mpamorona sary sy mpanakanto afisy. Nahazo loka maro ho an'ny afisy. Ny asany dia miresaka momba ny fomban-drazana japoney.
Tadanori Yokoo. Teraka tany Japon tamin'ny 1936. Iray amin'ireo mpamorona sy mpanakanto nahomby indrindra.
Ho fehin-kevitra, azontsika atao ny manamarika fa manokana ny famolavolana sary japoney ary azontsika fantarina izany raha toa ka eo anoloantsika izany satria manana endrika mahafinaritra izy. fahaiza-miasa, manala ny tsy ilaina nefa tsy manary ny hafatra tany am-boalohany. Azontsika sokajiana ao anatin'ny endrika minimalista izy io, endrika tsy misy fahasarotana, ny zava-dehibe ihany no aseho. Tsy maintsy mampiseho fahaiza-mamorona ho azy sy ho azy tsy misy fihatsarambelatsihy.
Atambatra ny fampiasana loko mamirapiratra, indrindra mena, volamena ary mainty, miaraka amin'ny loko mangatsiaka sy ny loko pastel. Ny Japoney dia tsy matahotra ny hanandrana loko ary izany no mahatonga azy ireo hamorona fitambarana toa tsy azo atao.
Afaka mianatra zavatra betsaka isika noho ny kolontsaina japoney rehefa manao ny tetitsika manokana, amin'ity kolontsaina ity dia misy zavatra maro hojerena. Mpamorona tandrefana maro no naka references avy amin'ny famolavolana sary japoney mba hamoronana ny endriny manokana. Tsy mahazatra ny fampifangaroana ny maoderina amin'ireo mpanakanto japoney taloha, izay nahavita izany ary nahavita endrika lehibe izay mbola marika amin'izao fotoana izao.
Ny hevitra mazava raha te hiara-hiasa amin'ny fomba japoney ianao dia afaka maneho zavatra betsaka amin'ny kely, tsy maintsy ataonao tsotsotra mba hampita tsara kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Inona avy ireo singa mandrafitra afisy japoney?